शेरधन राई भोलि(बुधबार) मुख्यमन्त्री बन्दै, को को बन्दैछन् मन्त्री ?
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर १ को मुख्यमन्त्री नेकपा एमाले प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता शेरधन राई बन्ने पक्का छ । वाम गठबन्धनले सोमबार बहुमत रहेको दाबी पेस गरे अनुसार बुधबार उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदैछन् । मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद बनाउने तयारीसमेत छ । बुधबार प्रदेश प्रमुख प्रा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले राईलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्दैछन् ।
राईलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरि सपथ लिएसँग सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् समेत विस्तार हुने भएको छ । प्रदेश १ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ७०\_३० प्रतिशतका आधारमा मन्त्रीहरु सरकारमा सहभागी गराउने बताइएको छ । एमाले र माओवादीमा मन्त्री हुने केहि नेताहरुको चर्चा समेत सुरु भएको छ ।
एमालेका प्रदेश सांसदहरू जीवन घिमिरे, हिक्मत कार्की, जगदीश कुसियत र सर्वध्वज सावा मन्त्री बन्ने बताइएको छ । उता माओवादीको भागमा बढीमा दुई मन्त्रालय पर्नेछ । जसमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने इन्द्र आङ्बोले गर्नेछन् ।
तर वाम गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँडफाँटमा केहि विवाद छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री र सभामुख एमालेको भएपछि बाँकी मन्त्रालय आफूहरूले रोजेर पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको भनाइ छ । यता एमालेले पनि राम्रा मन्त्रालय आफ्नै भागमा लिन खोजेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा दुवै दलले दाबी गरिरहेका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रको भागमा परेको उपसभामुखमा भने सरस्वती पोखरेल, उमिता बराइली र सीता थेबे आकांक्षी देखिएका छन् ।
मङ्गलबार ०१, फागुन २०७४ ०९:१७
अब झापा ,मोरङ,सुनसरी मात्रै हो १ नम्बर प्रदेश?कमसेकम एमालेले भुगोल ,लिङ्ग केही हेर्नु त पर्थ्यो। महिला बिहिन प्रदेश सरकार लाजमर्दो कुरा ।